Home » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Ny efitrano fandraisam-bahiny dia mamaritra ny zavatra niainan'ny vahiny
Edward Hopper, efitrano fandraisam-bahiny, 1931
Ny efitrano fandraisam-bahiny iray dia mety ho toerana mitokana raha toa ka tsy dia mahafinaritra loatra ny famolavolana anatiny, ao anatin'izany ny fanaka, ny fitaovana, ny rindrina / ny gorodona ary ny fitsaboana amin'ny varavarankely. Matetika loatra dia mahakivy ny miditra trano fandraisam-bahiny, mandalo ny fizotry ny fisoratana anarana, scan ny keycard hanokatra varavarana, ary arahabaina amin'ny fofona izay mampahafantatra ahy fa tsy nohavaozina ny efitrano tao anatin'ny 10 taona, na ny rivotra dia tsy mandeha mandritra ny herinandro, na ny hotely dia tia biby fa tsy midika izany fa ny karipetra dia nodiovina vao tsy ela na nesorina ny fako kitty.
Manapa-kevitra ny vahiny
Ny mpandeha dia manana safidy honenana: afaka manao famandrihana ho an'ny hofan-trano izy ireo, misafidy teti-bola, efitrano fandraisam-bahiny na efitrano fandraisam-bahiny mihaja; misafidy fananana marika na bizina. Toeram-pialan-tsasatra irina dia azo apetraka eo an-tampon'ny havoana, amoron-dranomasina, amoron-dranomasina, na koa anaty ala, mihantona eo am-pototry ny hazo.
Rehefa mihamitombo ny fifaninanana dia manome fanavaozana ny ao anatiny ny efitranon'ny hotely ireo mpana trano fandraisam-bahiny, manavao sy mamerina ny endrika, ny fahatsapana ary ny antso, mifototra amin'ny mombamomba ny vahiny sy ny toerana / toerana misy ilay trano.
Ny habaka ho an'ny daholobe izay faritra tsy fidiram-bola (izany hoe ny lobby, ivon-toeram-pandraharahana) dia napetraka eo amin'ny latabatra fanaparitahana, ary ireo mpamorona, mpitantana ary mpampiasa vola dia mandinika indray ny tena tanjon'ireo habaka ireo, manandrana mamantatra ny fomba ahafahany mamorona fikorianam-bola nefa koa mahatsapa ny tontolo iainana, mifandraika amin'ny toerana misy azy, ahazoana aina sy mahomby ary vidiny amin'ny fotoana iray mifanaraka amin'ny teti-bolan'ny vahiny.
Ny fifantohana vaovao amin'ny zava-niainan'ny vahiny dia ny fametrahana ny mpanao mari-trano sy ny endrika anatiny, eo anoloana sy eo afovoan'ny ekipa mpamolavola hotely rehefa manomboka manaiky sy miaiky ny maha-zava-dehibe ny famolavolana anatiny izy ireo amin'ny fihaonana amin'ny filan'ny vahiny, ny fientanam-po, ny saina ary ny filan'ny orinasa.
Avy amin'ny rafitra famandrihana tsy misy hadisoana amin'ny alàlan'ny fizotry ny fisavana dia tsy maintsy milamina ny traikefa iray manontolo. Ny fiandrasana amin'ny laharana amin'ny fizahana dia tsy misy hevitra mety velively; tsy vitan'ny hoe mampiseho tsy fanajana ny vahiny sy ny lanjan'ndrimanitra izy ireo, fa fisehoana tsy fahita amin'ny fahaiza-mitantana fotoana koa. Ho fanampin'izany, manome fotoana ny vahiny handinika ny lafiny rehetra amin'ny lobi sy ny mpiasa. Inona no hitan'izy ireo? Ny zava-drehetra - manomboka amin'ny karipetra sy fanaka maloto ka hatramin'ny chips amin'ny loko amin'ny rindrina. Tsikaritr'izy ireo ny fanamiana mpiasa tsy miraharaha sy tsy voatsindry, tsy madio kalitaon'ny rivotra (na mafana / mangatsiaka loatra), ary ny tsy fisian'ny teknolojia taonjato faha-21 izay hampiakatra ny hafainganan'ny fisoratana anarana.
Miaraka amin'ny fanekena fa ny fahasalamana ara-batana sy ara-tsaina ananan'ny vahiny no tokony ho ivon'ny fifanakalozan-kevitra rehetra, ny injenieran'ny hotely dia mifantoka amin'ny kalitaon'ny mekanika, fantson-drano ary ny rivotra amin'ny fananana, hahazoana antoka fa tsy misy loto ny fidiran'ny rivotra madio, ary tafiditra ao ny rivotra madio. amin'ny fiasan'ny trano. Ny aritista sy ny mpamorona anatiny dia manitatra ity ezaka ity amin'ny alàlan'ny fanalavirana ireo fitaovana izay mamoaka setroka misy poizina ary mifantina loko sy fitaovana famaranana izay mpanjifa sy tia tontolo iainana.
Ny jiro tsara dia ao anatin'ny programa ifantohan'ny vahiny. Ny jiro ho an'ny daholobe sy ny efitrano fandraisam-bahiny dia nihetsika mihoatra ny famoronana ny "toe-po" ary ny mpamorona izao dia mihevitra ny fampiasana ny habaka hamaritana ireo jiro sy loharanom-pahazavana mifanaraka amin'izany, manombatombana ireo hetsiky ny vahiny izay ahitana famakiana, fampiasana solosaina sy finday, fivoriana kely sy lehibe, fialamboly ary toeram-pisakafoanana - misy jiro sy jiro samy hafa ho an'ny traikefa tsirairay.
Mieritrereta eo an-toerana
Ny sanganasa kanto sy ny sary sokitra dia nanjary ampahany lehibe amin'ny famolavolana hotely, miaraka amin'ireo mpanakanto sy mpanakanto eo an-toerana avy amin'ny vondrom-piarahamonina akaiky izay tafiditra ao anaty ny asan'izy ireo ary aseho ho fampiratiana mihodina voafantina sy tantanan'ireo mpiambina matihanina.
Ny mpitrandraka hotely sasany dia manome lanja ny fampiononana, amin'ny fampidirana ireo singa fonenana ao anaty endrika izay misy loko isan-karazany izay lasa milalao sy maka sary an-tsaina kokoa, mampifangaro ny tsipika izay namaritra ny "hotely" sy "trano" teo aloha.
Ny famolavolana ny fandroana, ary ny fampitaovana dia mampiditra endrika kanto sy indostrialy. Amin'ny tranga maro, ny faritra voalohany nampiasaina taorian'ny nidirana tao amin'ny efitrano - dia ny trano fidiovana ary izy io dia mampivoatra ny kalitaon'ny trano fandraisam-bahiny ary azo antoka fa fanitarana ny toetrany. Miorina amin'ny fikarohana nataon'ny mpitsidika dia manova ny lamba famafazana rayon, 100 isan-jato ny hotely sasany ary soloina zavatra izay tena hisitrika rano tokoa. Mihamafy ny hairdryer, ary ny fitaratra Dolara dia soloina fitaratra izay tena tsara ho an'ny fampiharana makiazy satria hazavana sy mihetsika tsara. Ny orinasa iray aza dia nanakarama mpanakanto fanaovana makiazy mba hanampiana azy ireo hisafidy ny marina.
Ny jiro LED misy dimmera dia apetraka satria manome loko hoditra mafana sy mafana kokoa. Misy ny fihetsiketsehana fanoherana kovetabe fandroana ary ny tuba dia tsy hita raha tsy ao amin'ny sokajy kintana 3 sy ambany any Etazonia, satria mora kokoa ny orana, haingana kokoa ary kely ny habaka. Ny fitomboan'ny laza dia ny tsanganana mandro misy lohany amin'ny orana, mpanasitrana vatana ary fantsom-tànana. Ny varavarana mikorisa dia soloina varavarana mihetsiketsika (aka varavarana fitahirizana) - na tsy misy varavarana.
Ny trano fidiovana manadio tena miaraka amin'ny sensor mihetsika izay manokatra / manakaiky ny lambam-baravarana dia mahatonga ny vahiny sy mpikarakara trano hiasa tsara kokoa. Ny fauzety dia manome fantsona mihena miaraka amina toerana voafehy mifehy ny mari-pana nomerika, mitahiry vola sy rano miaraka amin'ny teknolojia paompy infrared izay mahatsapa ny mpampiasa ary mamono ny rano rehefa tsy eo ambanin'ny hazavana ny tanana. Ho fanampin'izany, ny teknolojia tsy misy taratra dia mampihena ny fandotoana.
Ny endri-javatra azo alamina dia misy ny fandroana amin'ny orana sy ny safidy fikasana nify izay mihazakazaka amin'ny fe-potoana nomena. Ny vata fidiovana ao amin'ny efitra fandroana dia ampiasaina amin'ny vata fampangatsiahana mba hahafahan'izy ireo hihazona ny fanafody hangatsiatsiaka ary koa hisotro zava-pisotro.
Rehefa lasa mpihaza kokoa ireo mpamorona fanaka, mampiditra loko marevaka sy fitaovana vaovao ho fanamboarana, ny hotely dia miala amin'ny fomba fanapahana cookie amin'ny seza, miasa, fisakafoanana ary miala sasatra.
Mitadiava loko sy lamba misy loko, loko ary famolavolana izay mamorona interiors miavaka, na nentim-paharazana na maoderina maodely ny lohahevitra hotely. Indraindray dia sary hosodoko iray tany am-boalohany izay manosika ny valopy misy loko, amin'ny fotoana hafa dia ireo fitaovana voafantina amin'ny rakotra gorodona sy ny karipetra amin'ny faritra. Any amin'ny trano fandraisam-bahiny, ny tompony sy ny fianakaviany dia mety mamaritra ny lanilan-doko. Ny loko mamirapiratra dia manana tanjona mihoatra ny hatsarana satria mety ho toy ny mpitady lalana izy ireo, manampy ny mpitsidika hahita faritra lehibe toy ny efitrano fisakafoana na ny birao eo aloha.
Jereo ny gorodona
Ny gorodona: mandeha sy mipetraka eo amboniny isika, indraindray ny biby fiompy dia hanisy sonia azy manokana, hipetraka eo amboniny ny sakafo, ary indraindray mety hitodika any aminy isika. Ny gorodon'ny trano fandraisam-bahiny dia tsy maintsy manintona, mateza, mora tazonina ary mahomby. Ny faritra fivezivezena be dia be dia tsy maintsy mahazaka ny fikapohana isan'andro, ny fandrakofana ny efitrano fisakafoana dia tsy maintsy mateza, voadio mora foana ary manampy (tsy manelingelina) ny traikefa momba ny sakafo / zava-pisotro.
Ny teknolojia dia nahita ny lalana mankany amin'ny gorodona amin'ny endrika karipetra, beton, laminate ary vinyl, gorodona vita amin'ny fingotra ary taila seramika.
Ny karipetra dia manana fananana vitsivitsy: mpitroka, afaka miatrika tasy, manampy haitraitra sy hafanana amin'ny habaka ary matetika no voafantina. Manohitra ny feo ihany koa izy io ary mety ho safidy tsy dia lafo loatra, miankina amin'ny kalitaony. Matetika dia haingana sy mora ny fametrahana; na izany aza, rehefa fantatry ny besinimaro ny zavatra tsy / tsy madio ara-pahasalamana ary hanontany amin'ny fotoana farany nanadiovana ny karipetra, dia jerena ny fampiasana karipetra nentim-paharazana.
Ny Concrete dia miasa tsara ho an'ny hotely mitady endrika indostrialy. Ny simenitra sasany dia afaka maka tahaka ny vato na taila, manome ny sisin'ny morontsiraka. Ny karazan-tany dia maharitra nefa lafo; na izany aza, rehefa tsaboina dia diovina mora foana izy io ary tsy handoto. Tsy mihoatra ny safidy hafa io (izany hoe karipetra, taila na hazo).
Ny lamina sy ny vinina dia azo ampiasaina amin'ny gorodona satria mora diovina izy ireo, mahatohitra tasy ary maharitra. Ny loko sy ny endriny dia lehibe ary mety ho valiny mora amin'ny toerana sarotra izy ireo satria azo ampiasaina haka tahaka ny endrik'ireo hazo, marbra, vatosoa, vato na biriky amin'ny ampahany amin'ny vidin'ny tena izy.
Rubber Flooring dia fahadiovana, porofon-drano, fanamafisam-peo, ary manolotra fitaovam-pandriana sy fanamafisam-po amin'ny efitrano. Ny vokatra dia mora diovina ihany koa, mahazaka tasy, mateza ary mandeha tsara amin'ny faritra be fivezivezena. Na dia mety tsy dia manintona toy ny safidy hafa aza izy io, dia manome trano ho an'ny hotely mitady endrika indostrialy sy minimalista. Ho fanampin'izay, vidiny mirary izy io ary manome androm-piainana lava.
Tela-keramika dia mateza sy mahafinaritra mahafinaritra. Mora ny manadio sy mitazona ihany koa. Ny tile dia azo soloina mora foana rehefa simba; na izany aza, lafo io. Na dia manana fiainana lava aza izy, ary misy amin'ny endrika sy loko maro, ny teboka vidiny dia mety ho antony handavana azy.
Famolavolana ny hotely Boutique
The BD / NY Hotel Boutique Design Show + HX: The Hotel Experience
Vao haingana aho no nanatrika ny NY Hotel Boutique Design Show sy ny HX: Hotel Experience ao amin'ny Javits Center ao Manhattan. Mpanentana maherin'ny 300 no nandray anjara tamin'ny hetsika HX izay nahitana fotoana ahafahan'ny mpividy sy ny mpivarotra mihaona ary koa manatrika fandaharam-pampianarana mifantoka amin'ny fironana, teknolojia ary asa. Ny HX dia manome ny matihanina amin'ny indostria hanana fotoana hianarana amin'ny namany ary hahafantarany ny fironana sy ny fanamby.
Tamin'ny faha-10 taonany izao, ny tsenan'ny BDNY dia nahasarika endrika mihoatra ny 8000 ny mpamorona anatiny, mpanao mari-trano, mpividy, tompona / mpamorona ary haino aman-jery, miampy mpamokatra 750 na solontenan'ny mpamatsy ho an'ny vokatra mifantoka amin'ny butikety ao amin'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny (izany hoe fanaka, fitaovana, jiro, kanto, gorodona, rakotra rindrina, kojakoja fandroana ary spa). Ny hetsika dia nahitana fandaharana marobe izay nandinika ny endrika fandraisam-bahiny misy fandraisana vahiny sy hetsika ara-tsosialy marobe.
Seza Lucano Dingana. Ny seza dingana dia noforonin'ny laboratoara famolavolana andrana, Metaphys ary Hasegawa Kogyo Co. any Japon. Ny orinasa dia namokatra tohatra sy scaffold hatramin'ny taona 1956. Namboarina tamina teknika vita vita vita amin'ny vovoka maharitra ny seza, ary vita amin'ny aliminioma sy vy milamina ny seza. Ny vokatra dia mifanaraka amin'ny JIS (fenitra indostrialy japoney). Loka: Red Dot Design, Design tsara ary fisafidianana Museum Museum JIDA.
Allison Eden Studios mamorona vera ary koa lamba vita amin'ny lamba, fehiloha, fatorana, ondana ary ny zavatra hafa rehetra izay miantsoantso COLOR (amin'ny fomba tsara). Edena dia nahazo diplaoma tamin'ny Fashion Institute of Technology, tao New York City (1995) niaraka tamin'ny BFA ary nanomboka namolavola tsipika vehivavy ho an'i Nautica. Ny orinasa dia miorina ao Brooklyn, NY.
Provence Platters. Ireo mpanao sary sokitra aostralianina dia mampiasa boaty divay frantsay oak, mamadika injeniera azy ireo ary mamadika azy ireo ho toy ny takelaka kanto misy ny marika marika tena izy. Betsaka amin'ireo boaty no mihoatra ny 30 taona ary miaraka amina fitaovana enti-miasa vita amin'ny vy vita amin'ny vy. Ny faritra dia azo antoka ara-tsakafo ary vita amin'ny tantely ambaratonga avo lenta, manome fototra tsara ho an'ny charcuterie sy mofo. I Ivan Hall no tompon'ny orinasa.
Fiankinan-doha amin'ny zavakanto. Nanomboka ny taona 1997 ny orinasa miaraka amin'ny iraka hitondrana zavakanto avo lenta sy voaviravira tsara ho an'ny tsena mpandrafitra, mpamorona ary mpivarotra. Ny fifantohana ankehitriny dia ny fampisehoana sary miavaka amin'ny acrylic marevaka ary ny studio famokarana ao an-trano dia mamela ny fikojakojana ny fenitra avo lenta amin'ny famolavolana sy ny tranomboky misy sary 15000.
Viso Lighting dia orinasa mpamorona jiro sy fanamboarana jiro manerantany. Natsangan'i Filipe Lisboa sy Tzetzy Naydenova, ny orinasa dia nanova ny atitany mampiasa ny hevitra maoderina amin'ny famolavolana indostrialy sy ny teknikan'ny famoronana.
Jiro jiro miaraka amina toetra i Fred. Ny fandanjana ny tongotra volo borosy 2 sy ny varahina borosy boribory, ny vatan'ny resin dia misy famaranana vita amin'ny gloss avo lenta ary vozona varahina borosy nopetahany diffuser fitaratra opal.
Nancie dia jiro latabatra mahatsikaiky izay manolotra toy ny diffuser fitaratra opal izay mipetraka eo ambonin'ny vatana ambony tampina gloss misy tsipiriany varahina boribory eo amin'ny hatoka, ny tongotra ary ny faritra ifotony.
Marset dia nanomboka tamin'ny 1942 ho toy ny orinasa mpanorina orinasa ao Barcelona, ​​Espana. Tamin'ny 1965 ny orinasa dia nanomboka nifantoka tamin'ny famokarana vokatra jiro. Ny ekipa mpamolavola iraisam-pirenena dia misy solontena avy any Chile, Alemana, Failandy ary Espana ary mamorona jiro tsy manam-paharoa izy ireo manomboka amin'ny fiotazam-boaloboka ka hatrany amin'ny futuristic, miainga amin'ny miafina ka hatramin'ny sahisahy.
Ny jiro latabatra FollowMe dia azo entina. Noho ny toetrany bitika, mafana sy mitokana, dia miasa tsara na any ivelany. Izy io dia mety tsara amin'ny habaka tsy misy fidirana amin'ny toeram-pivoahan'ny herinaratra ary azo ampiasaina hanoloana ny labozia. Ny tantana hazo terebinta dia mandray fikitika «olombelona». Ny jiro mitsivalana dia vita amin'ny polycarbonate ary miaraka amin'ny haitao LED sy dimmer, miaraka amin'ny batterie anatiny sy port USB ho an'ny famerenana indray.
Ilay Kindle Glow mitondra fomba vaovao amin'ny fanafanana / jiro ivelany izay maoderina sy milalao ary azo antoka fa manintona kokoa noho ny heater amin'ny habakabaka. Natomboka ny hevitra rehefa te hampiorina ny vahininy ireo mpanjifa manofa antoko rehefa miala sasatra any ivelany amin'ny andro mangatsiaka izy ireo. Ny akorany mifangaro ao amin'ny Kindle dia afaka miatrika mari-pana ambony ary ny alokaloka dia miaro ny hafanana tsara kokoa noho ny hafanana any ivelany. Toeram-pahefana mandeha amin'ny batterie dia manazava amin'ny loko isan-karazany. Ny Glow dia nahazo mari-pankasitrahana ho an'ny Design tsara avy amin'ny Chicago Athenaeum Museum of Architecture and design.
ID&C Fehin-tanana. Mijoro eo anoloan'ny varavaran'ny efitranon'ny hotely i Annoyance ary tsy afaka mahita ny karatra fanalahidy. Fantatrao fa napetrakao ao anaty poketranao, pataloha, palitao, palitao, valizy, nomenao ny SO - ary izao… rehefa tena mila izany ianao dia lasa nania. Noho ny ID&C dia nanjary tantara ity krizy ity satria namolavola tamim-pahakingana ireo fehin-tànana vita tanana ho toy ny kard keycards, manome fidirana haingana sy mora amin'ny efitrano fandraisam-bahiny. Nanomboka tamin'ny 1995, ny orinasa dia nanao mpisava lalana ny fampiasana fehin-tànana ary pass ho fiarovana ny hetsika. Ny fehin-tànana dia misy ny teknolojia azo vakiana ary mahazaka rano, orana ary ankizy mavitrika.
Carol Swedenlow. Empire Collection. Rihana Aronson. Nanomboka ny asany tamin'ny maha mpanao maritrano sy mpamorona tao Aronson's i Swedenlow, ary lasa filoham-pirenena tamin'ny farany. Mpanamboatra trano ho an'ny The Brownstone ihany koa izy, tetikasa fonenana avo lenta. Aronson dia nalaza noho ny fanolorany tena ho amin'ny faharetan'ny tontolo iainana ary koa ny fitaovana famolavolana ary ny fomba tsy manam-paharoa amin'ny famolavolana sy ny maritrano.
Seza Lucano Dingana
[email voaaro] Wristband
Carol Swedenlow. Empire Collection. Rihana Aronson
Nahasarika endrika, mpividy, mpanao mari-trano, trano fandraisam-bahiny ary mpanao gazety ny hetsika.